Ugxeka umndeni nomphakathi kwelikaNdlela | Isolezwe
Ugxeka umndeni nomphakathi kwelikaNdlela
Isolezwe / 13 August 2012, 11:09am /
UMNYANGO wezokuHlunyeleliswa kweziMilo kuleli uyaziqhelelanisa nesigameko okusolwa kuso owesilisa obesanda kuphuma ejele ngoshwele kaMengameli Jacob Zuma okuthiwa wadlwengula owesifazane osekhulile (94) KwaSwayimane.
Kulesi sigameko esingundabamlonyeni kusolwa lo Mnyango ngokudedela kwawo “izigebengu” ejele eziphenduka inkinga uma sezibuyiselwe emphakathini.
Umsolwa uNtuthuko Ndlela (28), owayeboshelwe icala lokuntshontsha edonsa isigwebo sezinyanga eziyisithupha eseyiqedile ingxenye yaso, naye waphuma ngaphansi kwalolu hlelo.
Iziboshwa ezingu-19 000 okwasekusele kancane ziqede izigwebo zazo zadedelwa ngaphansi kohlelo iSpecial Remission phakathi kuka-Ephreli noJulayi walo nyaka. Akuphelanga zinsuku ezingaki ngaphambi kokuthi ezingu-114 ezazidedeliwe zaphinde zaboshwa.
Abe-Institute for Crime Prevention and Reintergration of Offenders nabo bagxeka lo Mnyango ngokungabi nezinhlelo ezisezingeni zokuhlumelelisa izimilo abasuke begwetshiwe.
Izinsolo zokubuyisela izigebengu emphakathini zichithwe njengento engekho futhi engamampunge yiPhini laKhomishane wezamajele kuzwelonke uMnuz James Smallberger.
USmallberger uthe bebeqale babheke ubucayi becala umuntu alenzile nokuthi usedonse isikhathi esingakanani ejele ngaphambi kokuthi bathathe isinqumo sokuthi usengadedelwa noma cha. Uthe ngaphambi kokuthi badedele isiboshwa bebeqala basenzise uhlelo lokuhlumelelisa isimilo saso.
“UNdlela wagwetshwa ngoFebhuwari walo nyaka wahlala izinyanga ezintathu nezinsuku ezinhlanu ngaphezulu ejele njengoba eze wakhishwa ngaphansi kwalolu hlelo ngoMeyi. Siqale samenzisa izinhlelo zokumhlumelelisa isimilo olwenziwa ngabantu abagwetshelwe amacala okuntshontsha,” usho kanje.
USmallberg ube esegxeka umndeni kamsolwa nomphakathi ngokungamukeli kwabo uNdlela ngesikhathi ephuma ejele ethi lokhu kuvame ukwenza umuntu ophuma ejele azizwe engasamukelekile futhi kungaba nomphumela ongemuhle ekugcineni.
“Ngabe sikhuluma okunye hhayi indaba yokudlwengula ukube abakwaNdlela bayamukela indodana yabo iphuma ejele futhi bayakha. Kodwa bayiduba base bejaha ukugxeka lo Mnyango njengoba isisolwa ngokudlwengula manje.”
Lo msolwa ungaphakathi ejele manje emva kokuthi iNkantolo yeMantshi eNew Hanover ngesonto eledlule imnqabele ibheyili.